Dagaal saacado badan qaatay oo ka dhacay Hiiraan
BELEDWEYNE, Soomaaliya - Taliyaha qeybta 27-aad ee Ciidamada Xoogga dalka, Axmed Tareedishe ayaa sheegay in dagaal culus oo saacado badan qaatey oo ka dhacay duleedka Buulo-Burte inay ku dileen 24 kamid ahaa Al-Shabaab.
Taliye Tareedishe ayaa xusay in dagaalka uu yimid kadib markii Ciidamada dowladda oo ku jira howlgal amni ay la kulmeen weerar gaadmo ah, kaasoo sida uu sheegay ay iska-caabiyeen, islamarkaana ay dileen xubno badan.
Wuxuu shaaciyay inay socdaal howlgallo la isagu furayo wadooyinka isku xira gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan, oo mudo sanado ah Al-Shabaab ay ku haysay go'doomin, iyadoo aan jirin magaalo u furan degmo kale.
Howlgallada ayaa imaanaya xili HirShabeelle doorasho kusoo dhawdahay, sidoo kalena la qorsheeyay in December ay dalka ka billaaban doonto doorashadda heer Federaalka, oo Xildhibaanada lagu dooraan doono nidaamka 4.5.
Amniga Soomaaliya ayaan la isku halleyn karin, sidaas darteed waxaa lagu heshiiyay in lagu qabto doorashadda Baarlamanka labo magaalo maamul kasta, magaalo madaxda iyo tan labaad ee ugu wayn.
Dadka deegaanka ayaa sameeyay iska-caabin waxaana ay kasoo horjeesteen amarka Al Shabaab...
Dagaal culus oo ka dhacay gobolka Hiiraan [Fahfaahin]
Soomaliya 09.12.2019. 09:58
Askar ku dhega-beeshay qaraxyada Al-Shabaab oo qalab la siiyey
Soomaliya 05.02.2020. 15:00
Ciidamo u dhashay Jabuuti oo lagu weeraray bartamaha Somalia
Soomaliya 27.01.2019. 15:09
Xildhibaan ka tirsan BF Soomaaliya oo dacwad laga gudbinayo
Soomaliya 26.02.2020. 07:30